Etihad, Boeing, GE, Airbus ary Rolls Royce amin'ny fiaraha-miasa maharitra vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » News sustainability » Etihad, Boeing, GE, Airbus ary Rolls Royce amin'ny fiaraha-miasa maharitra vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Etazonia Vaovao Vaovao
Etihad, Boeing, GE, Airbus ary Rolls Royce amin'ny fiaraha-miasa maharitra vaovao.
Na eo aza ny fiantraikan'ny Covid19 amin'ny sidina eran-tany, ny fandaharan'asan'i Etihad's Greenliner dia nametraka hetsika maharitra maharitra tamin'ny taona 2020 sy 2021 mba hitsapana sy hamolavola vahaolana decarbonization maharitra ho an'ny fampiharana ara-barotra.
Etihad Airways dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa marobe tamin'ny 2021 Dubai Airshow.
Ny voalohany amin'ny A350 an'i Etihad, natomboka androany tao amin'ny Dubai Airshow ho "Sustainability50", dia mitondra "UAE50" tokana.
Ny asan'i Etihad miaraka amin'ny Boeing, GE, Airbus ary Rolls Royce dia manohana ny tanjona stratejika hanatrarana ny fampihenana 20% ny hamafin'ny entona amin'ny fiaramanidin'ny mpandeha amin'ny 2025, manapaka 2019% amin'ny 50 amin'ny 2035, ary mahatratra 2050 amin'ny XNUMX.
Etihad Airways dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa maro miaraka amin'ireo mpanamboatra ambony indrindra amin'ny indostrian'ny fiaramanidina, mpamatsy ary mpandray anjara amin'ny 2021 Dubai Airshow, mampiray ireo fikambanana mpitarika ny fiaramanidina miaraka amin'ny fandaharan'asa maharitra stratejika handroahana ny decarbonization mamorona fiaraha-miasa amin'ny fikambanana marobe indrindra amin'ny indostria hampihenana ny famoahana CO2 manerantany .
Ny fandaharan'asa maharitra an'ny zotram-piaramanidina, izay nifantoka tamin'ny fiaramanidina GEnX powered an'ny zotram-piaramanidina hatramin'izao. Boeing 787's eo ambanin'ny Programa Greenliner, dia hoderaina amin'ny programa mitovy amin'izany izay mifantoka amin'ny fampitomboana ny fahafahana atolotra amin'ny fampidirana ny fiaramanidina Airbus A350 Rolls Royce XWB. Ny voalohany amin'ny A350 an'i Etihad, natomboka androany tao amin'ny Dubai Airshow ho "Sustainability50", dia mitondra ny "UAE50" tsy manam-paharoa ho fankasitrahana ny 50.th tsingerintaonan'ny federasiona Emirà Arabo Mitambatra sy ny fanoloran-tenan'ny zotram-piaramanidina amin'ny tanjona 2050 amin'ny famoahana karbônina tsy misy aotra.
Etihad's asa miaraka amin'ny mpiara-miasa ao anatin'izany Boeing, GE, Airbus ary Rolls Royce dia manohana ny tanjona stratejika an'ny fikambanana mba hahatratrarana ny fampihenana 20% ny hamafin'ny entona amin'ny fiaramanidin'ny mpandeha amin'ny 2025, hanapaka 2019% amin'ny 50 ny etona amin'ny 2035, ary hahatratra ny entona aotra amin'ny 2050.
Raha niresaka tao amin'ny Dubai Airshow, Tony Douglas, Tale Jeneralin'ny Vondrona Etihad Aviation Group, dia niaiky fa ny fampiraisana ireo mpilalao indostrialy ireo ho an'ny decarbonation dia dingana tokana sy manan-danja ho an'ny indostria: "Tsy misy bala volafotsy ho an'ity iray ity, tsy misy hetsika tokana mazava. izay hanome vahaolana. Mitaky ny fampifangaroana sy ny fitambaran'ny fikambanana sy governemanta maro samihafa miara-miasa amin'ny fanatsarana kely sy mitombo.
"Ny governemanta sy ny mpandrindra dia tsy maintsy manampy ny indostria hitarika fanavaozana ho an'ny vahaolana maharitra amin'ny fanafoanana ny fiaramanidina. Ilaina ny fanohanana amin'ny fampivoarana ny famatsiana solika mora sy ampy. Ny fanatsarana ny lalan'ny sidina amin'ny lalana be olona indrindra eran-tany dia hisakana ny Co2 tsy tambo isaina tsy ho voatosika ho eny amin'ny rivotra. Misy fahafahana lehibe eto izay tsy mitaky teknolojia vaovao hampiharana ary azo ampiharina amin'izao fotoana izao raha misy sitrapo.
November 17, 2021 amin'ny 04: 25
Fantatro fa Rolls-Royce dia orinasa injeniera fanta-daza mifantoka amin'ny rafi-pamokarana herinaratra sy fanodikodinana. Ny asan'ny Etihad miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka toa ny Boeing, GE, Airbus ary Rolls Royce dia manohana ny tanjona stratejika hotratrarin'ny fikambanana.